Guddiyada doorashooyinka ee heer Qaran & heer gobol oo laga saarayo Siyaasiyiinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay madaxda dalku ay si adag uga hadlayaan wax kasta oo fududeyn kara doorashadan taariikhiga ah ee dalka ka dhacaysa bisha August.
Xasan Shiikh ayaa hadalkan ka sheegay kulan maanta Baydhabo ku dhexmaray hogaamiyeyaasha madasha wada tashiga iyo wakiilada beesha caalamka u jooga Somalia.
“Doorashadan muhiim ayay u tahay dhismaha Soomaaliyada cusub ee dimoqaadiga ah. Sidaa darteed waxa lagama maarmaan ah inaan wax walba oo fiican u hurno. guddiyada doorashada ee heer gobol iyo heer federal, waxaan isku raacney in siyaasiyiinta laga reebo, hawlahaasina loo daayo guddiyo farsamo si aan u kasbano kalsoonida shacabka, una abuurno xaalad horseedi karta doorashooyin xalaal iyo xor ah oo dalka ka dhaca. Waxaa dhammaanteen naga go’an in doorashada ay qabsoonto waqtiga loogu talagaley’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Hadalka Madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli xubno badan oo siyaasiyiin ah isuguna jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlada ay ku jiraan guddiga doorashooyinka heer Qaran ee dhowaan uu magacaabay Madaxweynaha